Archive du 20161122
Fikambanan'ny Zanak'Androy Hihetsika aorian'ny Frankofonia ?
Namory mpanao gazety tetsy amin�ny Telozoro Andrefan�Ambohijanahary omaly ny avy eo anivon�ny fikambanana zanak�Androy, nilaza ny ahiahiny fa mety hirongatra ny herisetra sy korontana raha tsy mandray fepetra mikasika ny raharahana habibiana niseho tamin�ny mpiray fiaviana tamin-dry zareo ny volana oktobra teo ny fitondram-panjakana aorian�ny fihaonana an-tampon�ny frankofonia
Minisitry ny serasera Mihozongozona ny sezany ?
Toy ireo namany teo aloha izay samy nitana toerana teo anivon�ny minisiteran�ny serasera sy ny fifandraisana amin�ny andrim-panjakana dia mandeha ankehitriny ny resaka fa efa ambivitra ihany koa ny fialan�ny minisitry ny serasera amin�izao fotoana izao, Andrianjato Vonison, eo amin�ny toerany.
Fifidianana savaranonando tany Frantsa Nangoron-damba sahady i Sarkozy
Betsaka amin�ny Malagasy, indrindra ny mpanao politika no manaraka ny raharaha politika any Frantsa noho ny fifamatorana ara-politika eo amin�ny tany roa tonta.
Depiote TIM - Rasoanoromalala Horace Mikarakara ny tanoran� Ambohimanarina
Raikitra ny Frankofonia Miala any koa ny savorovoro�
Tsy mety tapitra ny tsy fifankahazoan-kevitra momba ny frankofonia. Ny mpanao politika tsy mitovy fijery amin�ny mpitondra dia efa iaraha-mahalala ny tsy fankasitrahana sy fanakianana ny fanatanterahana azy.
Lalaina Berthn�s Voahosihosy ny soatoavin�ny Frank�f�nia
Manao ranolava ny fanehoan-kevitry ny olompirenena manodidina ny Frank�f�nia amin�izao fampiantranoan�i Madagasikara ny fihaonana an-tampony faha-16 izao.
Mpanohitra Tsy re feo intsony
Fotoana elaela izay no tsy dia nandrenesam-peo intsony ireo vondrona politika mitonona ho mpanohitra eto amin�ny firenena.
Aza misalobokomana !
Manahoana ry Jean a ! Efa tonga daholo ve ny vahinintsika sa mbola misy andrasana ? Arahabaina aloha fa tonga soa ny andro malaza a !
Kolikoly tao DIANA Manampahefana teo aloha nosamborina
Notanana am-ponja vonjimaika ny ben�ny tan�nan�Andranovondronina teo aloha sy ny PDS-n�ny kaominina ambanivohitra Ambondrona teo aloha izay samy ao amin�ny faritr�i DIANA taorian�ny fanadihadiana nataon�ny vaomiera misahana ny kolikoly na ny Bianco tao an-toerana.
Malagasy eto Madagasikara 0,57% no tsy miteny afa tsy ny teny Frantsay
Tafiditra tanteraka anatin�ny fihaonana an-tampon�ireo firenena miteny amin�ny ampahany na manontolo ny teny Frantsay na ny � Frankofonia � isika amin�izao fotoana izao.
Frank�f�nia 2016 Navotan-dRavalo i Hery
Raikitra ny Frank�nia 2016. Fivorian�ny filankevitra maharitra no hisantatra ny fihaonambe anio.
FIKAMBANAN�NY MPIKABARY MALAGASY Tonga hatrany Maorisy
Mba ho fampiroboroboana ny teny Malagasy hatreny ifotony, indrindra ho fampitana ny kolontsaina amin�ny taranaka faramandimby dia niitatra manerana ny faritra maro indray ny sampan�ny FIMPIMA ( Fikambanan�ny mpikabary Malagasy) raha araka ny fanazavan�ny filohany Hanitra Andriamboavonjy.
KAOMININA ANDOHARANOFOTSY Mitsinjo hatrany ireo mpandeha an-tongotra
Mila tsy hisy lalana ho an�ny mpandeha an-tongotra intsony amin�izao fotoana izao ny eny amin�ny lalam-pirenena fahafito.
Hamerina an-tsekoly ireo ankizy niala an-daharana
Ambadiky ny hita maso
Voninahi-pirenena no tandrovana amin�izao fandalovan�ny fihaonamben�ny frankofonia eto amintsika eto izao dia samy milaza avokoa ny rehetra fa aleo aloha milamina, mitony,